Wasiir Kuxigeenka cusub ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo xilka la wareegay(Sawirro) – Wasaaradda Maaliyadda
April 9, 2022	in Warka
GAROOWE – Wasiir Kuxigeenkii hore ee Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland ahna Xildhibaan DFS Mudane Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan ayaa xilkii ku wareejiyay Wasiir Ku-xigeenka cusub ee Maaliyadda Mudane Cali Cumar Caarshe.
Xil-wareejinta waxaa ka soo qaybgalay Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Baarlamaanka, Wasiirka Maaliyadda, Xeerilaaliyaha Dowladda, Guddoomiyaha Hanti-dhowrka Guud, Xisaabiyaha guud ee Dowladda, Agaasime guud ku-xigeenka Dakhliga iyo mas’uuliyiin kale oo Dowladda ka tirsan.
Xeer Ilaaliyaha guud ee Dowladda Puntland Maxamuud Ow Cismaan ayaa ugu horayn halkaasi ka sheegay in xilwareejintu Dowladdnimada qayb ka tahay xilwareejintaanna ay bogaadinayaan
Wasiir Ku-xigeenkii hore ee Maaliyadda Mudane Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan ayaa Madaxda iyo shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda oo uu hormuud u yahay Wasiir Xasan Shire uga mahad celiyay sida ay ula soo shaqeeyeen waxana uu ka codsaday in ay la sheegayaan Wasiir Ku-xigeenka cusub.
Dhinaca kale Wasiir Ku-xigeenka Maaliyadda Mudane Cali Cumar Caarshe ayaa u mahad celiyay Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Dowladda Puntland ee siiyay fursadaan uu dalka ugu shaqaynaayo waxaana uu balan qaaday in uu xooga saari doona shaqada loo igmaday.
Ugu dambayntii Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa u mahad celiyay Wasiir Qawdhan shaqooyinkii uu la soo qabtay Wasaaradda waxaana uu soo dhaweeyay Wasiir Ku-xigeenka Maaliyadda wuxuuna wasiirku xusay in hortaalo shaqo culus oo ah kor u qaadidda dakhliga Dowladda.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo kormeer ku tagey xaruntii hore ee Wasaaradda Maaliyadda(Sawirro+Muuqaal)